Saddex ka mid ah culimada Tabliiqa oo ku dhintay shil maanta ka dhacay duleedka Qardho (Dhegeyso) – Radio Daljir
Saddex ka mid ah culimada Tabliiqa oo ku dhintay shil maanta ka dhacay duleedka Qardho (Dhegeyso)
Diseembar 28, 2013 5:05 b 0
Qardho, December 28, 2013 – Shil baabuur oo ay ku dhinteen dhowr ka tirsan culimada Tabliiqa ayaa goor hore oo maanta ah ka dhacay duleedka degmada Qardho ee xaruunta gobolka Karkaar.
Saddex ka mid ah culimada ayaa geeryooday waxaana dhaawac soo gaaray toddobo kale, markii gaarigii ay wateen uu ku rogmaday duleedka Qardho, sida ay goob-joogayaal u sheegeen Daljir.
Goob-jooge ku sugan Qardho ayaa xaqiijiyey baabuurka ay la socdeen culimada uu laamiga ka baxay isagoo ku socday xawaare aad u sareeya, dhaawaca iyo maydka ayaa haatan la dhigay Cisbitalka Qardho, mid ka mid ah dhaawaca ayaa laga dayrinayaa ilaa hadda.
Culimada baabuurku la dhacay ayaa ka soo tegay magaalada gobolka Nugaal waxayna ku sii jeedeen magaalada Boosaaso ee xaruunta gobolka Bari, in kastoo aan si rasmi ah weli loo xaqiijin halka ay si ka yimaadeen, marka laga tago xigashada goob-joogayaasha.
Dhegeyso: – Maxamuud Cabdi oo daljir ka tirsan ayaa waraystay goob-jooge
Culimada oo musharixiinta ugu baaqay in ay iska dhowraan balan-qaadyo been ah (Dhegeyso)